အကယ်၍ ဘာသာ စကားကို နားလည်ခြင်း မရှိပါက၊ အခြား ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်သည် ဖြစ်စေ၊ ထည်.သွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းသည် ဖြစ်စေ ပြုလုပ်ဖို. အကြံပြုပါသည်။
ရှေ.ဆက်မသွားဖို. ရွေးချယ်ပါက၊ အခြားဘာသာစကား တခုခု ရွေးချယ်ခွင်. သို.မဟုတ် ထည်.သွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခွင်. ရရှိပါမည်။